विवाहकाे पहिलो रातमा हुने यी ५ अनाैठा कुरा - Everest Dainik - News from Nepal
विवाहकाे पहिलो रातमा हुने यी ५ अनाैठा कुरा
विवाहपछि हुने सुहागरात अथवा पहिलो रातको अनुभव भारतीय फिल्ममा जति ग्लैमरस दखाइन्छ वास्तविकतामा भने त्यस्तो हुँदैन् । तपाईको विवाह मागेर परम्परागत रुपमा भएको छ भने तल दिएका पाँच चरणमा कति पटक लज्जाउनु खालको हुन्छ व्यवहार हुन्छ विवाहको पहिलो रातमा । आउनुहोस यसबारेमा आज हामी केही जानकारी दिन्छौं
घरकालाई सबै थाहा हुन्छ ?
त्यो क्षण दूल्हा–दुल्लै दुबै शरम र संकोचले भरिएका हुन्छन् । तपाईका सबैलाई थाहा हुन्छ की तपाई के गरिरहनु भएको छ । हुन सक्छ विवाहको रीति–रिवाजलाई औपचारिकता दिदादिदै तपाई थाकेर हैरान हुनुहुन्छ । र लाग्न सकछ विस्तरामा जाने वित्तिकै निदाइ हाल्ने ।
तर तपाईका भाइबहिनी, नातेदार सबैले यो मौकालाई आफ्नो हातबाट उम्किन दिदैनन् । र यस्ता–यस्ता जोकहरु गर्न थाल्दछन् कि जुन तपाईले कहिले सोच्ननुसम्म पनि भएका थिएन ।
गुलाबको फूलहरुले सजाइएको विस्तरा
तपाईलाई मन परोस नपरोस् । विवाहित जोडीका लागि पहिलो रात तपाईलाई मन परे पनि नपरे पनि कोठा, बेडलगायत सबै करा फूल र गिफ्टले सजाइएको हुन्छ । जसलाई देखेर तपाईलाई शरम लाग्न थाल्दछ । यदि तपाईलाई गिफ्टमा कन्डमको प्याकेट दिएइयो भने तनाव नलिनुस् । त्यो तपाईलाई चाहिन्छ ।
अपरिचित व्यक्तिसन्ग रात विताउनु
धेरै जस्तो मागी विवाहमा जोडीले पहिलो रातमा एकले अर्कालाई सुन्ने बुझ्ने भन्दा पनि अन्य कुरामा बढी ध्यान द्यिन्छन् । जस्तै विवाह कसरी होला ? कति खर्च लाग्ला ? विवाहका दिन दूलाहा–दुलही कस्ता देखिएलान ? यस्तै सोचाइका बीच जव सुहागरातको दिन आउँछ त्यो बेला उनीहरुले सोच्छन् एक अपरिचित व्यक्तिसँग आज रात विताउनु पर्ने छ । त्यो व्यक्ति जसबार थाहा छ तर चिन्दैनन् । अव त्यो अपरिचित व्यक्ति उनीहरुको जीवन साथी हो । र आफ्नो वाँकी जीवन विताउनु छ ।
मागी विवाहमा धेरै जसो जोडीले एकले अर्कालाई राम्रोसँग चिन्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा कसरी आशा गर्न सकिन्छ की उनीहरु सेक्सका लागि खुल्न सकुन । नाङै हुउन ? र सेक्सका लागि सहज महशुश गरुन ।
विहान हुन्छ मजाक
पहिलो रातभन्दा धेरै मजाक त भोलिपल्ट बिहान हुन्छ । जब दूलाहा–दुलही कोठाबाट बाहिर निस्किन्छन त्यसबेला नातेदारहरुलाई एकपटक फेरि मजाक उडाउने मौका मिल्दछ । कही मानिसहरु त हाँस्छन् । केही भने परिवार नियोजनको सल्लाह दिन थालिहाल्छन् । यो अवस्थामा नव वर–वधूका लागि ठूलो लाज लागे विषय बन्छ ।
ट्याग्स: पहिलाे रात, मागी विवाह